Tsy vaovao amin'ny finday ao Meksika. Fiarahana ho an'ny olon-dehibe. Tsy misy fisoratana anarana. Tena sary
Tsy vaovao amin’ny finday ao Meksika. Fiarahana ho an’ny olon-dehibe. Tsy misy fisoratana anarana. Tena sary
ny malaza indrindra Mampiaraka toerana ao amin’ny Aterineto. Ny faharoa anaram — ny planeta, ny Fitiavana, ary izany no tanteraka voamarina. Ny olon-tsotra Niaraka eto voafafa ka dia afaka mampiasa ny Mampiaraka toerana ho an’ny tanjona isan-karazany. Taona vitsy lasa izay ny mpanatrika dia kely mpampiasa maro, nefa ankehitriny ny fe-solontena fito ambin’ny folo an-tapitrisany maro mpampiasa. Izany dia ny mponina ny tanàna hafa sy ny faritra ny firenena, ary koa ny olom-pirenena ny Firenena hafa. Isan’andro amin’ny ranoka volkano planeta hita kokoa folo an’arivony ireo mpampiasa vaovao. Tsotra sy mivantana ny Mampiaraka toerana miaraka amin’ny tena nomeraon-telefaona, izay miara-mitondra ny tokan-tena ny vahoaka rehetra manerana izao tontolo izao.
Afa-tsy ny asa fototra ny fifandraisana, afaka mifandray amin’ny forum, milalao, mamorona ny bilaoginy manokana ihany koa, ary na dia mifandray amin’ny lahatsary amin’ny chat.
Manokana dia tokony handray vola ny diaries
Ny asa lehibe indrindra dia taratry ny zava-nitranga ao amin’ny fiainan’ny olona iray, ho iray ny fotoana — ora, andro, taona, ary na isam-bolana. Noho ny fidirana ao amin’ny diaries ny mpampiasa hafa dia lasa mora ny hahatakatra ny zavatra mahaliana ny olona sy ny zava-mitranga eo amin’ny fiainany.
Mba hisoratra anarana ho ampy fotsiny ny manana mailaka
Rehefa manamarin-tany dia ho hita any amin’ny asa na inona na inona.
Misy karama fahafahana amin’ny fitiavana planeta
Ny malaza indrindra dia hanangana ny pejy manokana amin’ny fikarohana. Rehefa nandeha ny fotoana, ny mpampiasa dia manomboka ho very tany, soloina solymi, ary avy eo dia thousandths. Ny vola lany amin’ny asa fanompoana ambany, sy ny fandoavam-bola atao amin’ny alalan’ny fandefasana SMS ny hafatra. Ny mpamorona no miasa foana amin’ny zava-baovao vaovao sy fahafahana
← Ny lahatsary amin'ny chat an-tserasera
Meksika ara-Tsosialy - Mampiaraka Fampiharana Daty Chat ho Meksikana →